सूर्यग्रहण प्रभाव: धनु राशिका लागि अतिकष्ट, कुन राशिका लागि कस्तो फल मिल्ने ? - TodayKhabar
सूर्यग्रहण प्रभाव: धनु राशिका लागि अतिकष्ट, कुन राशिका लागि कस्तो फल मिल्ने ?
काठमाडौं- आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ । गएरातिबाटै सूर्यग्रहणको सूतक शुरु भए पनि केहीबेरमा सूर्यग्रहणको स्पर्श शुरु हुँदैछ ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्नेछ । बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुनेछ । पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ । सूर्यग्रहण झण्डै तीन घण्टा रहनेछ ।
सूर्य ग्रहण राशि अनुसार प्रभाव पार्ने हुँदा कुनै राशिहरुका लागि निकै अशुभ मानिन्छ । यो सूर्यग्रहण धनु राशिका मानिसहरुलाई अति कष्ट मानिएको छ । मेष राशि भएकाहरुका लागि शुभ देखिँदैन । माननाशको योग रहेको छ । त्यसैगरी वृष राशिका मानिसले पनि सूर्यग्रहण अवलोकन गर्दा अशुभ हुने देखिन्छ ।
वृष राशि भएकाहरका लागि कष्टको योग छ । त्यसैगरी मिथुन राशिका मानिसले सूर्यग्रहणको अवलोकन गर्दा स्त्रीपीडाको फल देखिन्छ । सिंह राशिका लागि पनि चिन्ता, कन्या राशिका लागि व्यथा, वृश्चिक राशिका लागि क्षति, धनु राशिका लागि घात, मकर राशिका लागि व्यय हुनेछ ।
कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन यी चार राशिका लागि भने यो सूर्यग्रहण निकै शुभ रहने छ । ककर्ट राशिका मानिसले सूर्यग्रहणको अवलोकन गर्दा सुख प्राप्तिको योग देखिन्छ भने तुला राशिका लागि पनि श्रीप्राप्तिको योग रहेको छ । त्यसैगरी, कुम्भ राशिका लागि लाभ प्राप्ति हुनेछ भने मीन राशिका लागि शुख प्राप्तिको फल मिल्ने छ ।
सूर्यग्रहण धनु र मकर राशिका लागि भने निकै अशुभ रहने ज्योतिषचार्याहरु बताउँछन् । उनीहरुका लागि अतिकष्टको योग रहेको छ । त्यसैले यी राशि भएका मानिसहरुले सूर्यग्रहणको अवलोकन गर्नु अशुभ हुनेछ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न शुभ मानिन्छ ।
ग्रहणका समयमा दीक्षा लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजीकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
वामदेव ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा, एमाले बैठकमा नजाने
बाढीपहिरोबाट ७ जनाको मृत्यु, ७ बेपत्ता, मृत्यु हुनेमा पाँच पुरुष र दुई महिला
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुरु, यस्ता छन् एजेण्डा
एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौंमा
पूर्वडीआईजी रमेश खरेल आज नयाँ दल घोषणा गर्दै
माइतीघर मण्डलामा प्रेम कैदीको गर्जनः सरकारलाई दलालहरुको झुण्ड भएको संज्ञा (भिडियो सहित)
नेकपा र राजपाबीच धुव्रीकरणः यसरी सम्भव भयो सहमती, प्रदेश २ को सरकारमाथि खतराको संकेत
Copyright ©2022 | All rights reserved. TodayKhabar. Hosted By: Web Hosting in Nepal